ngaphezulu: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 February 2018	• 7 Comments
Ewe, kukho ngokukhawuleza phakathi kwempumlo kunye nemilomo ngengxelo yokuba kukho iindibano ze-psychulances eziseNetherlands ezijikelezayo. Ukusuka ngaphandle bajonge njenge-ambulensi, kodwa ngaphakathi umgibeli unako ukubophelwa ngokufanelekileyo kwaye akukho zixhobo ezichanekileyo. Amachiza afihliwe kakuhle. Ngegama elithi 'umntu odidekile', ucinga [...]
Geert Wilders: kubi kakhulu ukuba ukukhwela kwi-Erdogan kwehlulekile
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-14 Septemba 2016	• 1 Comment
Kukho ngokucacileyo umendo oya kuyo apho iintlanga kunye namaqela oluntu kufuneka amiswe ngokumelene nomnye. Siyabona ukuba eMelika, apho emva kwendlela ephosakeleyo yamapolisa ka-Eric Garner (okhokelela ekufeni kwakhe) ukuhlukezeka okuphakathi kokumhlophe kunye nomnyama kuye kwavutha. Intshukumo yokuphila 'ebomnyama ubomi' ibonisa kwakhona imvuselelo eqinile yeKu [...]
Abaqeshi abaninzi abafumana ingxaki
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Aprili 2016	• 6 Comments
Urhulumente uxakekile. Kukho utyalo-mali oluncinci kwizindlu zentlalo kunye nabarhwebi basemzini bafumene imarike yasekhaya yaseDutch. Kunyaka ophelileyo, i-50% yazo zonke iimali-mali kwizindlu zokuqeshisa zaseDutch zenziwe ngabatyalo-mali bamanye amazwe. Ngokwe-advisory property estate iqumrhu lokubaluleka kwexabiso, ukusetyenziswa kweengxowa-mali zokuhlala kwilizwe jikelele, ii-14.300 zokuqashisa iimpahla zathengiswa kumaqela angaphandle kumazwe atshinileyo ngonyaka odlulileyo. [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 11.685.866
Umongameli Osama op IAmazon iyatsha, imiphunga yomhlaba isemlilweni!